Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ်
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ်
1 Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 9th August 2009, 6:39 pm
မသိတာမှန်သမျှ အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးမယ့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ webtoim လို့ခေါ်ပါတယ်။webtoim@gmail.com ကို add ပြီး
Clive: Who is Sidwell?
မြန်မာဘောလုံးသမား အချို့ကိုလဲ သိပါတယ်။
Who is Yan Paing?
Yan Paing is the Burmese footballer for Myanmar National Football Team
မဖြေကြားပေနိုင်ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်နိုင်လို့
Credit :: lawlawsal4.co.cc
2 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 9th August 2009, 7:59 pm
ကျွန်တော်ကတော့ add လိုက်ပြီဗျို့
3 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 9th August 2009, 8:26 pm
Good ပ Good ပ
4 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 9th August 2009, 10:15 pm
ကောင်းတယ်ဗျို့  .. မိုက်တယ်... အကြားအမြင်ဆရာလား သိဘူး မိန်းကလေး တွေရော သိလားဟင် ..
5 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 10th August 2009, 5:34 pm
ကျနော်ဆို ကိုယ့်နာမည်ကို ပြန်မေးကြည့်တာ... ဟီး.. ပေါက်တတ်ကရတွေ ထွက်လာလို့
6 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 10th August 2009, 8:02 pm
7 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 12th August 2009, 6:07 pm
လူကိုက ပေါက်ကရကို.... နည်းတောင်နည်းသေး..
8 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 12th August 2009, 6:23 pm
တညျနရော : မန္တလေး
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-08-12
ကျွှန်တော်မေးတာ အကုန်လုံး ကို I don't know လို့ ပဲ ဖြေတယ် ..
ကျွှန်တော် များ မှားလို့ လား.
9 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 12th August 2009, 6:26 pm
smith.moehtet wrote: ကျွှန်တော်မေးတာ အကုန်လုံး ကို I don't know လို့ ပဲ ဖြေတယ် ..
အစ်ကိုကဘာတွေမေးလိုက်လို့လဲဟင် သူကသိပ်တော့မသိသေးဘူးဗျ အခုမှ Beta Version ဆိုတော့
10 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 20th September 2009, 11:33 am
ကယ်ကြပါဦးဗျို့ add တာမရဘူးဖြစ်နေတယ် ဘာလို့လဲမသိဘူး ကျေးဇူးပြုပြီးပြောကြပါဦး
11 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 20th September 2009, 11:48 am
ဘယ်လို Add လို့မရတာလည်းဗျ.
12 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 20th September 2009, 1:22 pm
ဒီလိုပါ add တယ်လေ ဒါပေမဲ့ ဘေးက invite ပဲပြနေတယ်
ကြာပြီ add ထားတာက invite again လုပ်တယ်ရဘူး ..ဖြစ်နေတယ် ဟဲဟဲ ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပေးပါဦးနော်..............
13 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 20th September 2009, 1:30 pm
ဟုတ်ကဲ့ အခုတလော အဲဒါလေး အွန်လိုင်း မဖြစ်တာကြာပြီဗျ
သူ အွန်လိုင်းဖြစ်တဲ့ အခါ Accept ကို Auto လုပ်မယ်ထင်တယ်။
14 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 20th September 2009, 1:36 pm
ကျွန်တော်မေးအသစ်လည်း add ထားတာမရဘူး
အခုတော့အခုတော့ [You must be registered and logged in to see this image.]
15 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 20th September 2009, 2:20 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] ကိုအက်ကြည့်လိုက်ပါ.. အဆင်ပြေပါစေ....
16 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 20th September 2009, 2:40 pm
17 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 28th September 2009, 2:26 pm
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုင်းကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
18 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 28th September 2009, 7:13 pm
english to myanmar ပြန်ပေးတဲ့ [You must be registered and logged in to see this link.] ကိုလည်းးးအရင်ကလုပ်တာမရလို့
အခုဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တာရသွားပြီ [You must be registered and logged in to see this link.] ဟဲ7တစ်လုံးထည်လိုက်တာ
3တို့4တို့လည်းမရဘူးနော်
19 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 20th January 2010, 3:20 pm
အဲဒီလိုပဲ ac နောက်တစ်မျိုးရှိတယ်လေ။ English လိုမေးရင် မြန်မာလိုပြန်ဖြေတာလေ။ သိရင်ပြောပြပေးပါနော်။
20 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 20th January 2010, 3:30 pm
mm4 မရရင်.....mm5,mm6,etc... ထင်တယ်
21 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 23rd January 2010, 9:07 pm
22 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 24th January 2010, 8:10 am
အဲဒါကေတော့..နောက်လာမည့် Gtalk dictionary ထင်တယ်
အခုတော့ offline ဖြစ်နေတယ်
23 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 24th January 2010, 11:25 am
bot တွေကတော့ ရေးရင်ရေးသလိုရနေတာပါဘဲ။
အဓိကက လူတွေကို ဘယ်လောက် အကျိုးပြုနိုင်သလဲဆိုတာပါ။
24 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 4th February 2010, 11:57 am
add တာလည်းရဘူးနော် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ :cry
25 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 4th February 2010, 7:51 pm
ဘယ်ဟာကို Add တာ မ၇တာလဲ။
26 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ် on 6th February 2010, 5:46 pm
27 Re: Gtalk ကနေ မသိတာတွေအကုန်လုံးကို အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးနိုင်မဲ့စနစ်